Ny Fiparitahan’ny Solika Ao Amin’ny Ranomasina Adriatika No Hitamason’ny Voina Voajanahary Mihamahazo Vahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2016 6:28 GMT
Kostrena, Rijeka, Croatia. Sary avy amin'i Goran Kovačić, nahazoana alalana.
Tamin'ny folakandron'ny 12 Mey, nivoaramainty ny ranomasina Adriatika tao Kostrena akaikin'ny ny tanànan‘i Rijeka, tanàna kroaty manamorona ny ranomasina ao amin'ny faritra Urinj, rehefa vaky ny fantsona goavana avy ao amin'ny fanadiovan-tsolika iray ao an-toerana, INA, izay niteraka voina ara-tontolo iainana.
Naka sary ny mponina tao an-toerana ary nitatitra ny tranga tamin'ny manampahefana, izay nanangona ekipa hiezaka hanitsy ny fahasimbana. Noho ny fiovana goavana eo amin'ny toetrandro sy ny hadadasiky ny fianahan'ny solika anefa dia heverina mbola hitohy hatramin'ny herinandro ambony ny bemidina fanadiovana savaranonando.
Mandritra izany fotoana izany dia namoaka fanambarana ofisialy fialantsiny noho ny fahavakisana ny fanadiovan-tsolika ary nampanantena fa hanamboatra ny fahapotehana ao anatin'ny 24 ora (fotoana efa lasa ela dia ela).
Araka an'i Eko Kvarner, vondrona mpandana ny tontolo iainana iray, dia efa antitra sy tsy voakijakoja araka ny tokony ho izy ny fitaovana ao amin'ny fanadiovan-tsolika, ary izany no mahatonga ny fahasimbana matetika, hoy ry zareo, ka mampidi-doza ny fahasalamana sy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny mponina monina eo amin'ny faritra.
Kostrena, Rijeka, Croatia. Saripikan'i Goran Kovačić, nahazoana alalana.
Nitranga tao amin'ny faritra ny fianahana raha efa nanao fanentanana manohitra ny hampivelarana fitrandrahana solika ao amin'ny ranomasina Adriatika ny mpandala ny tontolo iainana.
Nandritra ny COP21 tao Paris tamin'ny volana Desambra lasa teo, izany hoe telo andro monja taorian'ny nanaovan'ny mpitarika manerantany sonia ny Dinan'i Paris sy ny fiangaviana hampihena hatramin'ny 30 isanjato ny fivoahan'ny etona miteraka fihafanan'ny tany alohan'ny taona 2025, dia nanambara ny fikasana hitrandraka solika ivelan'ny morondranomasina Ulcinj, ao amin'ny ranomasina Adriatika i Montenegro. Nandao ny fikasana hitrandraka solika ivelan'ny morondranomasina Dubrovnik ny governemanta Kroaty teo aloha noho ny tsindry mavesatra avy amin'ny vahoaka sy ny ONG Kroaty sy Italiana. Saingy mbola misokatra ny fanontaniana mamela ny fandavahana hitadiavana solika ao amin'ny firenena, noho ny fikasana hanao fikarohana fandavahana amin'ny faritra 29 manerana an'i Adriatika ao anatin'ny 30 taona sy famokarana hydrokaribonina (tafiditra na ny solika na ny etona).
Nanontanian'ny Global Voices i Vladimir Bajzec avy amin'ny Fandraisana an-tanan'Olompirenena NAŠ Jadran, izay manohitra ny fitadiavana solika ao Adriatika, raha manontany tena izy raha manana ny fahafaha-manao sy ny fitaovana ahafahana miatrika ny fianahan'ny solika samirery ny firenena Balkan:
Mazava loatra fa tsy manana ny fahafaha-mamaha trangan-javatra goavana ny governemantanay ao an-toerana, ary tsy liana hiatrika izany ihany koa raha ny tena izy. Ny tombontsoany (ao amin'ny fikambanana) ihany no tandroviny. Mitovy amin'ny toeran-kafa manerana izao tontolo izao ihany ny fampiroboroboana ny tetikasan-tsolika vaovao, indrindra fa amin'ny toekarena tratran'ny krizy – amin'ilay lazaina ho ‘fenitra avo indrindra ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny natiora’, araka ny ‘fomba fanao tsara indrindra manerantany’, mampanatena fitomboan'ny toekarena sy fanasoavam-bahoaka amin'ireo olom-pirenena tsy mahazo torolalana feno na misy diso ny fampahafantarana nomena azy.
Ny ranomasina Adriatika dia tondroina ho toerana ara-tontolo iainana mafana manana ny lanjany, amin'ny fahamaroan'ny karazam-biby marefo ahiana ho lany taranaka, manazava i Bajzec:
Ny faritra kroaty amin'ny ranomasina Adriatika fotsiny dia efa fonenan'ny karazam-biby mirenireny mihoatra ny 7000, maro amin'izy ireo no arovan'ny lalàna kroaty sy ny lalàna iraisampirenena amin'ny fiarovana ny natiora, ary ny sasany aza efa ambavahoanan'ny faharinganana. Kely, marivo ary somary mikatona ny Ranomasina Adriatika, azy izay no maha mora mampidi-doza kokoa ny fandotoana maharitra ateraky ny fianahan'ny solika sy ny etona mbamin'ny fahafonganan'ny fiainan'ny biby tsy ompiana.
Ny fizahantany ihany koa no loharanom-bola voalohan'ny mponina ao amin'ireo tanàna Balkan ankilan'ny Ranomasina Adriatika ireny, ary manahy ny mponina fa very ny fiainany raha voaloton'ny solika ny ranomasina sy ny morony.
Tsy fahadalana mihitsy ny tahotra tahaka izany. Eny antenatenan-dalana amin'izao tontolo izao, ny sehatra fiasana ambony ranomasina iray antsoina hoe Brutus an'ny Shell fotsiny no vao nampihanaka solika amin'ny barikan-tsolika 2100 nankao amin'ny Helodranon'i Meksika, izay vao maika mampidi-doza ny rafi-piainana efa marefo dia marefo.
Ao anatin'ny tontolo miatrika maripana miakatra ambony tsy mbola nisy toy izany tamin'ity lohataona [ilabolantany avaratra] ity sy ny toetrandro eny amin'ny tendrony sy ny faratampony mahatonga ny olona tsy hanan-trano na rano ity, dia vao mitombo indray ny dikan'ny fiovan'ny [fikorontanan'ny] toetrandro. Ao anatin'ny ezaka fanentanana fampihenana ny fiankinana amin'ny fandrehitra milevina ambanin'ny tany, dia olona an'arivony manerana izao tontolo izao no nanatevin-daharana ny fanentanana Break Free, mandrisika ny firenena hiala amin'ireo fandrehitra milevina [arintany, solika, etona,…] ary hirona any amin'ny angovo azo havaozina.
Na i Montenegro na i Croatia dia samy firenena talaky masoandro tsara ary manana fahafaha-mampiasa araka izay tiana ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny rivotra. Noho ireo loharanon-karena voajahanary ireo, dia miatrika fahasembanana ihany ny faritra, mbola miankina amin'ny fandrehitra milevina ihany izy. Tamin'ny Desambra 2015, ohatra, ny Germanwatch nanome tondro fanahiana ambony eo amin'ny toetrandro hoan'ireo fanjakana Balkan (noho ny fisian'ny tondradrano sy ny toetrandro henjana izay namafa ny faritra roa taona lasa izay). Ny ahian'ny mpanao fihetsiketsehana dia ny fanahiana lehibe indrindra ao amin'ny faritra dia ny tsy fihetsehana, rehefa ny tontolo iainana ankapobeny no resahina.